बलेकी प्रेमिका भनिएकी प्रिज्माकी बहिनी प्रिन्सी छिन् चर्चित मोडल सुधिर श्रेष्ठको प्रेममा, दुवैले एक भएपछि गोप्य स्थानमा खिचेको तस्विर रारातरात भाइरल, के विबाह गर्दैछन् यो जोडी ? – Gazabkonews
बलेकी प्रेमिका भनिएकी प्रिज्माकी बहिनी प्रिन्सी छिन् चर्चित मोडल सुधिर श्रेष्ठको प्रेममा, दुवैले एक भएपछि गोप्य स्थानमा खिचेको तस्विर रारातरात भाइरल, के विबाह गर्दैछन् यो जोडी ?
काठमाडौं । गायक सुरेन चन्द र गायिका विशाखा शाहीको स्वरमा रहेको कस्तो सुहाको फुली बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । आवाजमा दम र मेलोडी भरीएका पछिल्लो पुस्ताका लोकप्रिय गायक सुरेन चन्दको नयाँ गीत कस्तो सुहाको फुलीमा शब्द र संगीत चर्चित संगीतकार सिएल शर्माको रहेको छ ।
प्रिज्मा, प्रिन्सीसँग सुधिर र पलको रोमान्टिक अभिनय र निर्माण यूनिटको अथक मेहेनतका कारण गीतले राम्रो चर्चा पाइरहेको निर्माण यूनिटको भनाई छ । शान थापाको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोको कोरियोग्राफी राजिव समिरको रहेको छ । सुप्रिम पराजुलीको सम्पादन तथा कलरिगं रहेको भिडियोको छायांकन अर्जुन तिवारीले गरेका छन् । हेर्नुहोस् छमछम नचाउने र टिकटक बनाउन मिल्ने यो रमाइलो भिडियो